ကမ္ဘာမြေအပြင်ဘက်ကိုလိုနီ ပတ်သက်. နာဆာယှဉ်ပြိုင်မှု၏ဆုရှင်တွေ့ဆုံရန် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
အိုင်ဗင် Popov နှင့်အတူအင်တာဗျူး
သူကမ္ဘာမြေအပြင်ဘက်ကိုလိုနီ ပတ်သက်. နာဆာပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက် Grand Prix အနိုင်ရသောအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်သူရူပဗေဒ, မြူးနစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကပထမဦးဆုံးစာသင်, ဂျာမနီလေ့လာတယျ။
ကျွန်မအမျိုးသားအဆင့်မှာရူပဗေဒနှင့်သင်္ချာအတွက်အလှူငွေများရှိသော်လည်း, ငါ့ထံသို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအရေးကြီးသောစီမံကိန်းနှင့်အာကာသကိုလိုနီများ၏ဒီဇိုင်းများအတွက်နာဆာယှဉ်ပြိုင်မှု၌ငါ၏နှစ်ခုပါဝင်သူဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် (2012) ကြှနျုပျတို့အမျိုးအစားထဲမှာဒုတိယခဲ့ကြသည်နှင့်ဒုတိယ (2014) အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း Grand Prix ချီးမြှင့်ခံရနှစ်ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သီးခြားစီ, ဇန်နဝါရီလငါအဖွဲ့သည်အဋ္ဌမရာအရပျအနိုင်ရဘယ်မှာ Boston မှာဟားဗတ်နှင့် MIT မှဖြင့်ဖွဲ့စည်းသင်္ချာပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်သောငါ၏တက္ကသိုလ်ရဲ့အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
© Cherno ပိုသတင်းစာ
နာဆာများအတွက်စီမံကိန်းကိုဂျာမနီ၌သင်တို့၏လေ့ကျင့်ရေးမှတစ် Springboard ခဲ့သလား
ဂျာမနီမှာ, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်သင်၏ဒီပလိုမာနှင့်ဂျာမန်တစ်ဦးလက်မှတ်အတွက်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့အမှတ်အသားရှိသည်အဖြစ်, တက္ကသိုလ်မှလက်ခံခဲ့သည်ခံရဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ ခက်ခဲသည်အဘယ်သို့ဘွဲ့ရသည်။ ဒီရှုထောင့်ခုနှစ်, နာဆာစီမံကိန်းများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေချိန်မှာငါပစ္စုပ္ပန်မှာငါ့အလေ့လာမှုများ၌အလွန်ငါ့ကိုကူညီပေးသည်ပေးသောသဘာဝကသိပ္ပံနှင့်သင်္ချာ၌ငါ့အသိပညာ, ပိုကောင်းလာစေဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးသိပ္ပံ၏, အစဉ်မပြတ်ငါငါ 7th တန်း၌ရှိ၏ကတည်းကသူတို့နှင့်အတူအလေးအနက်ထားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအများစုရူပဗေဒနှင့်နက္ခတ္တဗေဒကြိုက်ခဲ့သည်။ ငါအနာဂတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရူပဗေဒပညာရှင်များနှင့်တစ်ဦးအပျော်တမ်းနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စဉ်းစားလို။ ငါ 2th တန်းအတွက်အခါ 10 လကြာ Nuremberg အတွက်လဲလှယ်ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သည်ပြီးနောက်မြူးနစ်သွား၏စိတ်ကူးသည်ငါ့ဆီသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဲဒီမှာအရာအားလုံးကြိုက်တယ် - လူအများ၏သဘောထားကနေ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတဆင့်ဘီယာနှင့် Wursts မှစတင်။ တလက်ပေါ်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဥရောပ၌ရူပဗေဒလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တွေထဲကတစ်ခုရှိတည်ရှိသည်နှင့်မှတပါး, မြို့သူ့ဟာသူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မြောက်မြားစွာသုတေသနဌာနနှင့်စမ်းသပ်ဆဲစင်တာများအများအပြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းကြောင့်ငါအထူးသ, မြူးနစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက်ဘွဲ့ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ထို့နောက်ရှိသမျှတို့ကိုငါရူပဗေဒပညာရှင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းချင်ပါတယ် - ပိုကောင်းကျနော်တို့တှငျနထေိုငျရာကမ်ဘာကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားပါနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
တခါတရံကျွန်မတဦးတည်းကသူ့ကို, မမိမိသားသမီး, မမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာအခြားမည်သူမဆိုမထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရဘို့ကတလက်ပေါ်, ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာကဘယ်လောက်စိတ္တဇနဲ့ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာအနတ္တထင် ကျွန်တော်တို့ကိုလူ့စေသောအရာတစျခု, အရာအားလုံးလူတိုင်းနှင့်အဖြေကိုအဘို့ထာဝရရှာဖွေရေးနှင့် ပတ်သက်. အမည်ရသိချင်စိတ်။ ကိုယ့်ဟာသူတို့ရဲ့အလှအပကိုခံစားအချိန်အရာကြွင်းလေငါ့အဘို့ငါ့စိတ်ထဲကနေထိုကဲ့သို့သောအတှေးအဖျက်ပစ်ရန်လုံလောက်သောထက်ပိုပါတယ်။
လူအတော်များများဟာ, သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များအရှုံးမပေးအခြားသူများနှင့်မျှဝေမအဖြစ်မှန်သို့သူတို့ကိုငါလှည့်ကြပါဘူး။ သငျသညျဤအရာတစျခုမဟုတျပါ။ အဘယ်အရာကိုအတွင်းစိတ်ခံစားချက်သင်ပြုသကဲ့သို့သင်တို့ပြုမူစေသည်?
အစဉ်မပြတ်ငါအမြဲလိုချင်ငါတို့စိတ်ကူးများကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်အဖြစ်မှန်သို့သူတို့ကိုငါလှည့်အဘို့စစ်တိုက်ခြင်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီခဲ့သူဒေါက်တာ Radeva ဖြင့်ငါ၏အမှု၌တွေ့ဖူးတဲ့ထောက်ခံမှု; ကြှနျတေျာ့မိတျဆှမြေားဖွငျ့လညျးအကြှနျုပျ၏အသင်းဖော်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်ပထမဦးဆုံးအမြဲငါ့စကားကိုနားထောင်နဲ့ကျွန်မနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စတင်ရန်အရာရာ၌ငါ့ကိုကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်မူသောငါ့မိဘများက။
အိုင်ဗင် Popov အကြောင်းပိုမို:
Facebook အမှာအိုင်ဗင် Popov
ပြိုင်ပွဲ, နာဆာ, လူ, ကြောငျးသား | | rating:5/ 30